तुलसा खत्री पलायन हुनुमा सरकारको गल्ती छ-पुरुषोत्तम पौडेल, पूर्व खेलकुदमन्त्री | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
तुलसा खत्री पलायन हुनुमा सरकारको गल्ती छ-पुरुषोत्तम पौडेल, पूर्व खेलकुदमन्त्री
काठमाडौं, १५ मंसिर । पूर्व खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल नेकपा नेता पनि हुन् । साग खेलकुद र नेपालमा खेलाडी पलायनको अवस्थाबारे ऋषि धमलाले पौडेलसँग गरेको कुराकानीः
सागमा जसरी तयारी हुनुपर्ने हो, त्यो भयो कि भएन ?
नेपालले साग खेलको लागि आफ्नो साधन, स्रोत र क्षमता अनुसार तयारी गरेको पाइन्छ । हाम्रो अवस्था तपाईं हामी सबैलाई थाहा छँदैछ । त्यही अवस्थाअनुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
पुननिर्माण अभैm भइराखेको छ, पहिल्यै गर्नुपर्ने होइन र ?
अहिले यो सागको झन्डा लिएको चार वर्षभयो । त्यही बेलादेखि लागेको भए अहिले यस्ता हतारो र चटारो खेप्नुपर्ने थिएन । तर, हामी तीन वर्ष आरामले बस्यौं, चौथो वर्ष मात्रै सुरु गरौं त्यसैले चटारो भएको हो ।
जुन काम पनि हामीकोमा किन समयमा हुँदैन ?
पहिलो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी राज्यको हो । यसभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्रतियोगिता नेपालगन्जमा हतारमै गरियो । त्योभन्दा पहिला विराटनगरमा पनि त्यस्तै भयो । अहिले हामी साग प्रतियोगिता काठमाडौंमा गर्दैछौं । यो पनि त्यस्तो चटारोमा गर्दैछौं । पहिलो कुरा त खेलकुद जस्तो मानव जीवनको लागि महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसलाई हामीले कुनै प्राथमिकतामा राखेका छैनौं । बजेटको कुरा यो साल अति कम छ । देशको राजधानी जस्तो ठाउँमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कवड हल छैन । हाम्रो दशरथ रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानिँदैन । हाम्रो रंगशाला देखेर विदेशीहरु छक्क पर्दछन् । त्यस्तो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कवर्ड हल भनेर । अर्को कुरा हाम्रो खेलाडीहरुको स्तर हेरेर ठोकुवा गरेर भन्ने अवस्था आउँदैन । हामी अनुमान गर्दछौं ।
अनुमान गरेर मात्रै भएन, आधार दिनसक्नु प¥यो नि ?
आधार दिनलाई हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीलाई प्रशिक्षण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल सामग्रीमा हामीले खेलिरहेको हुनुप¥यो । जस्तो हाम्रो खेलाडीले खेल खेल्दा लगाउने सामग्रीहरु प्रतिस्पर्धाको दिन लगाउनुपर्छ । अन्तका खेलाडीहरुले वर्षौंदेखि त्यही सामग्रीसँग खेलिरहेका हुन्छन् । त्यो सामग्रीसँग ज्ञान भएकासँग हामी नभएकाले लड्दा के हुन्छ ? अहिलेसम्म हामी हाम्रा खेलाडीको मनोबलका कारण लडिरहेका छौं । खेलका लागि जुन म्याट दुईदिन अगाडि आएका छन् । त्यसमा अभ्यास गर्नै पाएका छैनन् हाम्रा खेलाडीहरुले । त्यसमा वर्षौदेखि लेखिरहेकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वाध्यता हाम्रा खेलाडीहरुलाई छ । यस्तो अभावका बाबजुद पनि जापानमा नांगो खुट्टा दौडेर जीतबहादुर केसीले स्वर्णपदक ल्याइदिए ।
हाम्रा खेलाडीहरु विदेश खेल्न गएर उतै लुक्छन् नि ?
कहिलेकाही यस्ता घटनाहरु भएका छन् । जस्तो चाइना, कोरिया, युरोपतिर गए भने केही साथीहरु त्यहाँ बस्दिन्छन् । किन त्यस्तो भयो ? त्यसको कारण बुझ्न जरुरी छ । जस्तो अहिले साग खेल सुरु हुनु तीन अगाडि कतारतिर लाग्नुभयो । यसो हुनुमा सरकारको गल्ती छ । किन पहिलो उनीहरुलाई उपयुक्त प्रशिक्षण छैन । दोस्रो प्रोत्साहन छैन । त्यस्रो राष्ट्रिय खेलाडीलाई कम्तिमा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ त्यो पनि छैन । हामीले राष्ट्रको लागि खेलेर के पाउँछौं भन्नेमा खेलाडीहरु आस्वस्त छैनन् । यसले खेलाडीहरु पलयान भइरहेका छन् ।
यो पलायन्तालाई रोक्न के गर्नुपर्छ ?
नम्बर एक उनीहरुलाई यथेष्ट संरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । तिमीहरु राष्ट्रको लागि खेल्दैछौं भने तिम्रो लागि राष्ट्र छ भन्ने हुनुपर्छ । उनीहरुको खेल जीवन सकिनासाथ रोजगारीको व्यवस्था हुनुप¥यो । रोजगारी नहुने हो भने निवृत्तिभरण हुनुपर्छ । यीमध्ये कुनै एउटा विकल्प भयो भने खेलाडीहरु देशको लागि आरामसँग खेल्छन् । स्वर्णपदक तीनपटक ल्याएका खेलाडी पनि विदेश पलाएन हुने स्थिति छ । खेलकुदमा लगानी बढाइदिने हो भने स्वास्थ्यमा घटाउँदा पनि हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको रकम घटाएर खेलकुदमा लगाउने बित्तिकै राम्रो हुन्छ । अर्को पूर्वाधार पनि हामी समयमा बनाउँदैनौं । साग आयो भने ६ महिना अगाडिबाट दातासँग कुरा गर्न थाल्दछौं । अरु देशले यस्ता साग प्रतियोगितालाई अवरको रुपमा लिन्छन् । हामीले चाहिं वाध्यताको रुपमा लिन्छौं । अर्को साग गर्छौं भन्दै गर्दा हाम्रो चार÷पाँचवटा मन्त्री फेरिए । मन्त्री फेरिएपिच्छे प्राथमिकता पनि फेरिए ।
खेलाडीको खानपान पनि राम्रो भएन भन्ने छ नि ?
यसमा पनि केही सुधार भएको छ । तर, पनि खेलअनुसारको खेलाडीलाई डाइट चाहिन्छ । यसका विभिन्न नियमहरु छन् । जस्तो कुन खेलको निम्ति कस्तो खाना खानुपर्ने ती चिजहरुको अध्ययन हुनुपर्छ । हामीको सबै खेलाडीलाई एउटा रेटमा खाना खर्च दिन्छौं । खाना हामीले खेलअनुसारको दिन सक्दैनौं । अरु अरु मुलुकले खेल अनुसारको खानाको खर्च दिएको देख्छन् । त्यसरी नै हाम्रा खेलाडीले पनि खोजेका हुन्छन् । पुरी तरकारी र कचौरी खाएर बग्सिङ खेल्न इस्टामिना पुग्दैन ।
सागमा नेपालको उन्नति कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यसपालिको सागमा हामी दोस्रो हुन्छौं ।
अहिले नै नेपाल पहिलो हुनलाई गाह्रै छ ।
लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनको निर्णयको बिन्दुमा सरकार पुगिसकेको छ- डा. खेम कार्की, विज्ञ सल्लाहकार स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं, २० जेठ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन हुने
लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन भएको छ-विश्वराज पोखरेल, भ्याली डिआइजी
काठमाडौं, १९ जेठ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेल कोभिड १९ रोकथामका लागि
लकडाउन क्रमशः खुकुलो हुँदैछ, अब कोरोनासँग लड्दै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्छ- मन्त्री भट्ट
काठमाडौं, १९ जेठ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकार नयाँ मोडालिटीका साथ
एमसीसीबारे रावल : कसैको उपनिवेश नभएको देश आज आएर एउटा कम्पनीबाट सरकार चल्छ ?, यो राष्ट्रको अस्तित्वको लडाईं हो
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर